Majlisa keennaaf nama bakka nu bu’u filanne, seeraafi heera eegsisuun, sagalee ummataa kabachisiisuun qaama ilaallatu bira jira! | Oromia Shall be Free
bilisummaa May 28, 2022	Comments Off on Majlisa keennaaf nama bakka nu bu’u filanne, seeraafi heera eegsisuun, sagalee ummataa kabachisiisuun qaama ilaallatu bira jira!
Duula marumatu duula,daboo marumatu itti bobba’a, kan hinjifannoon galu garuu muraasaa beeki!
Namtichi biyyaa teennaafi Amantii jeeqe,nama walitti naqe,islaama bakka lamatti addaan baasaa jira warri jedhee nu wajji shubbisaa bahee qabsoo jijjiiramaa kana godhe hedduudhaa hubadhaa! Haa tahu malee
Gaafa Filannoo prezidantii majlisaa haaraa bakka buusutti ceenu waan tahuuf deemu hubannaan o’ooo jedhanii hedduun isaanii harka isaanii sassaabatanii xisxinbaa osoo hinjedhiin harka maratanii laalaa jiru! Dubbiifi barruunis lafa lixan, “si ganee abbatti hin himanii jalumaa goran jedha “ Oromoon!
Hojjattu Rabbiif hojjadhu, dhiistu itti dhiisi ayyaana laallattee hin dhufin jennaan!
Warroonni amantii biraa duulli isaan dhimma majlisaa irratti geggeessaa jiran,eenyu eessa akka dhaabbate agarsiisaa jira,eenyuun wajji akka hojjataa turanis ifa godhan!
Nuti immoo akka isaan jedhan san baala gizeellee miti baala taraas miti” jechi kuni nuhinmadaalu nuti abbaa biyyaati,abbaa haqaati,baala gizeen nidhufa nikufa, nuti hindhufnes wanni kufnuufis hinjiru,qaamni kamuu kan nukuffisuu dandahus,mirgaafi humna nutti qabus hinjiru tika Rabbii jala jirra,haqa qabna,haqaan bulla, haqaaf deemna,haqa lafarratti argamsiisna!
Abbaan biyyummaa immoo dachee Rabbi uumerra sochoo’uu qofa osoo hintaane,waan dachiifi samiin ani keessa jiru qabdu hundattuu qixa sirriitiin yoo itti fayyadamne qofa!
Ka cinaa galtee,sanyummaafi gosummaan kee diinii kee ol sitti tahe,kan gaafa keenna kuffisnu harka rukuttee gaafa kee rukutamu immoo koola cufatte, qilee quxaleetti tari malee namni ufirra garagalee si dhaggeeffatu hin jiru jennaan!!!!
Jabaa kee jabeeffadhu!Silaa nuti hinjennee,Erga dubbii ufitti kakkaasuu fedhan immoo prezidantiin Majlisa federaalaa kan tahuu qabu seeraanis tahee heeraanis hawaasa baldhaa kanarraa tahuu qaba wanni jennuuf haqa waan taheefi!
Ustaaz: Sufyaan Usmaan
Previous Hogganoonni paartilee siyaasaa Toophiyaa 5 fi bakka bu’aan Ameerikaa maryachuun dhagayame.
Next President Uhuru Kenyatta and Ethiopian PM Dr Abiy Ahmed enjoy a spectacular display